Arattai Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Arattai Apk no fampiharana Android farany indrindra, izay manolotra ny endri-pifandraisana sy serivisy tsara indrindra. Izy io dia manolotra serivisy fiarovana sy tsiambaratelo avo indrindra ho an'ny mpampiasa Android mba hanana fifandraisana azo antoka sy azo antoka. Raiso amin'ny fitaovana Android-nao ity fampiharana ity ary alao avy hatrany ny serivisy rehetra misy.
Ny fifandraisana dia mora kokoa amin'ny fanangonana farany ireo fampiharana Android. Misy ny sasany amin'ireo sehatra tsara indrindra eran'izao tontolo izao, izay ampiasain'ny olona ho fampiharana mpitondra hafatra. Ireo sehatra ireo dia manome ny mpampiasa hifandraisana amin'ireo namana sy fianakaviana. Noho izany, mety hieritreritra ianao hoe, maninona no tsy manome sosokevitra an'ity app ity fotsiny isika raha misy sehatra hafa?
Raha, mitovy ny eritreritrao, dia fantatrao fa misy politika tsy miankina amin'ny fiainana manokana isaky ny fampiharana. WhatsApp dia iray amin'ireo rindranasa be mpampiasa indrindra ankehitriny, saingy noho ny fanavaozana ny politika momba ny fiainana manokana dia tsy voaro intsony ny mpampiasa. Noho izany, maniry zavatra azo antoka sy azo antoka ny olona.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahagaga ity ho anao, izay manome anao ny endri-pifandraisana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa hankafizinao. Raha te hampiasa an'ity app ity ianao dia alaivo ny fampahalalana mifandraika rehetra ary ankafizo izany. Noho izany, mijanòna miaraka aminay ary alao ny votoaty fampahafantarana rehetra.
Topimaso momba ny Arattai Apk
Izy io dia rindranasa fifandraisana Android, izay manolotra serivisy mpitondra hafatra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa mankafy. Afaka mampiasa an'ity sehatra ity ny mpampiasa mba hifandraisana amin'ireo fifandraisana hafa amin'ny alàlan'ny serivisy sy fiarovana tsara indrindra. Sehatra maimaimpoana io, izay manolotra ny olon-drehetra hiditra sy hampiasa azy io maimaim-poana.
Misy fizarana samihafa misy ahafahan'ny mpampiasa mampiasa eo no ho eo ny fampiharana. Ny fizarana tsirairay dia manome serivisy voafaritra tsara hampiasain'ny mpampiasa. Manome ny mpampiasa hisoratra anarana miaraka aminy hampiasa ny serivisy rehetra misy.
Ny fizotry ny fisoratana anarana dia mila laharana finday, ahafahan'ny mpampiasa mameno ny fisoratana anarana. OTP dia halefa amin'ny isa nomena, izay tsy maintsy miditra ao anaty boaty takiana. Raha vantany vao vita ny fizotry ny fisoratana anarana dia mila mahita ny fifandraisana rehetra ianao.
Miankina amin'ny fanangonana nomerao finday ao amin'ny fitaovanao fotsiny izany. Ireo mpampiasa, izay mampiasa ity fampiharana ity, dia ho hita ao amin'ny lisitry ny fifandraisana. Raha tianao ny namana hafa hampiasa azy io amin'ny fifandraisana, dia azonao atao ny mandefa rohy fanasana hampahafantatra azy ireo izany.
Ny endri-pifandraisana no tsara indrindra, izay misy ny Text, ny antso an-telefaona ary ny chat video. Izy io dia manolotra ny mpampiasa handefa lahatsoratra sy handefa naoty feo. Ny naoty feo dia ho mazava sy haingana ny fizotran'ny fandefasana, fa raha tianao ny mampiasa video chat, dia manome ny sasany amin'ireo vokatra tsara indrindra amin'ny chat video mba hahatonga ny resaka ho mahasarika kokoa.
Ny serivisy antso an-tariby dia manome ny mpampiasa hamorona na hiditra amin'ny antso an-dahatsary vondrona, izay ahafahanao mifandray amin'ireo namanao tsara indrindra indray mandeha. Misy endri-javatra maro ho an'ny mpampiasa, fa ny tena zava-dehibe dia ny fiarovana dia tena avo. Ny mombamomba ny mpampiasa, tsy hitahiry mihitsy.
Hanana feo sy resaka video misy encryption end-to-end ianao, izay midika fa hesorina daholo ny angon-drakitra rehefa tapitra ny antso. Ny angonao dia tsy hampiasain'ny orinasa na zaraina. Noho izany, hanana ny sehatra azo antoka indrindra ianao, izay ampiasain'ny Indiana an-tapitrisany. Noho izany, apetraho ny rindranasa fifampiresahana tsara indrindra ao India Arattai ary ankafizo.
Raha mbola te hampiasa WhatsApp ianao, saingy tsy misy fetra. Avy eo ianao dia afaka manana ny kinova tsara indrindra, izay fantatra amin'ny hoe OG WhatsApp Pro. Azonao atao ny manana ny traikefa tsara indrindra tamin'ny firesahana tamin'ity fampiharana ity, tsy misy fetrany.
Anaran'ny fonosana com.aratai.chat
Fampiharana fifandraisana tsara indrindra
Serivisy fandefasana hafatra haingana sy malefaka
Resaka an-tsoratra, Feo ary Lahatsary
Mizarà lahatsoratra, naoty feo, horonan-tsary
Fiarovana data avo lenta
Fampitaovana miafara farany
Vondron-dresaka amin'ny feo sy horonan-tsary
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mandany fotoana amin'ny fitsidihana sehatra maro ianao. Hizara ny kinova farany an'ity app ity izahay, izay azonao sintonina mora foana. Ny bokotra fampidinana dia misy eo an-tampon'ny sy ambany amin'ity pejy ity, kitiho eo izy ary hanomboka ho azy ny fisintomana.
Arattai Apk no fampiharana tsara indrindra hifandraisana amin'ireo namanao sy fianakavianao. Raiso amin'ny app Android ity rindrambaiko ity ary alao ny serivisy rehetra misy. Raha manana fangatahana momba an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany hizara ny hevitrao.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Aratai Apk, App Arattai, Arattai ho an'i India Post Fikarohana
Drama Live Apk Download ho an'ny Android [Vaovao]